Xukuumadda Soomaaliya: Somaliland waxay diidday in Abiy Axmed iyo Farmaajo oo wada socda ay ka degaan Hargeysa - BBC News Somali
Image caption Farmaajo ayaa horay u booqday Itoobiya
Ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in 'Soomaaliland ay khasaarisay fursad dahabi ah'.
Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta GoobJoog ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu ku dambeeyo wadahadalka labada dhinac iyo waxa dhankooda u qabsoomay.
"Wadahadalka Somaliland iyo dowladda Soomaaliya wuxuu ka mid yahay qodobbada ugu waaweyn ee ahmiyadda u leh guud ahaan qaranka Soomaaliyeed, gaar ahaanna wuxuu waajib ka saaran yahay aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee kasoo jeeda Soomaaliland, wuxuuna joogitaankeennu macno ku fadhiyaa marka ay wadahadalladaas miro dhal noqdaan".
Image caption Mahdi Maxamed Guuleed
Ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajoyo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay xiriir toos ah lahaayeen.
'Soomaaliland waxay lumisay Fursad Dahabi ah'
"Waxaan kuu sheegayaa in dhawaan ay Soomaaliland lumisay fursad dahabi ah oo ahayd in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweyne Farmaajo ay rabeen in iyagoo wada socda ay ka dagaan Hargeysa, laakiin markii madaxweynaha Soomaaliland iyo maamulkiisa ay wada tashadeen ma aysan suurtoobin, ilaa haddana dhankeenna diyaar baan u nahay inaan mar walba tagno, ha noqoto Farmaajo oo kaligiis ah ama isagoo uu la socdo Abiy", ayuu yidhi.
Lahaanshaha sawirka XAFIISKA AFHAYEENKA SOMALILAND
Image caption Madaxweynihii hore ee Nigeria, Olusegun Obasanjo
Image caption Wasiirka arrimaha dibadda dalka Eretria, Osman Saleh.